Saika hanapoaka grenady…: lavon’ny zandary i Man, mpanao kidnapping naman-dry Lama | NewsMada
Randriamihantanirina Jasmin, fantatra amin’ny anaram-bosotra hoe “Man”. Naman-dry Lama efa nifampitadiavana hatramin’ny taona 2000 noho ny “raharaha kidnapping”. Nandritra ny fanohizana ny fanadihadiana, teny Ankadiefajoro, ny talata teo no lavon’ny zandary ny lehilahy.
Nosamborin’ny zandary tany Mahajanga, ny asabotsy 4 jolay 2020 lasa teo i Man. Na­ka­rina teto an-drenivohitra hanohizana ny fanadihadiana sy ny fifandraisany akaiky amin-dRamandiamanana Nor­bert na i Lama (na i Baina efa maty voatifitra teny Analamahitsy)izy, ny alatsinainy teo. Momba ny raharaha fakana an-keriny no nisamborana azy, raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny lehiben’ny sampana fikarohana heloka bevava eo anivon’ny zandary, ny Kly Ravelomanana Tahina. Ny ampitson’io, nitohy ny fanadihadiana azy ka nanoro ny tranony “Villa” iray eny Ankadiefajoro i Man. Nidina teny an-toerena ny zandary niaraka taminy ka hita tao an-tranony ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy Kalachnikov, tranom-bala ana basy Kalachnikov miisa 15 ary grenady mahery vaika. Tamin’io fotoana io indrindra anefa no nandeha niditra tao an’efitrano fivoahana i Man naka grenady nafeniny tao ka nikasa hanapoaka izany tany amin’ireo zandary. Raikitra ny fifanjevoana satria niaro tena ny zandary raha nahita ny grenady teny an-tanany. Vokany, naratra mafy voatifitry ny zandary i Man. Nezahin’ny zandary nentina teny amin’ny hopitaly HJRA ihany izy, saingy tsy avotra intsony ny ainy noho ratra nahazo.
Mifanakaiky trano i Man sy Rasamy mpanao kidnapping…
Nohamafisin’ny teo anivon’ny zandarimaria fa mi­fa­nakaiky amin’ny tranon-dRabearison Samuël, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Rasamy, jiolahy amin’ny fakana an-keriny mpiray tendro amin’i Lama ny tranon’i Man. Ny volana marsa 2019 izy no maty voatifitry ny zandary rehefa nokarohina an-taonany maro. Hita nandritra ny fisavan’ny zandary ny tranony tamin’izay fotoana izay ny basy Kalachnikov telo niaraka tamin’ny bala marobe. “Voaporofo fa tena mpiray tendro ary ao anatina fikambanan-jiolahy mpaka an-keriny ireto jiolahy ireto”, hoy ny zandary. Tsiahivina fa jiolahy raindahiny amin’ny fakana an-keriny ry Lama sy ny ekipany ary efa nanomboka ny taona 2000 no nikarohan’ny zandary azy ireo. 20 taona aty aoriana vao nifarana ny tantaran’i Lama sy ry Man. Tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny an’i Anil Karim, ny 27 avrily 2020 ka nahazoan’izy ireo vola amina miliara. Nam­baran’ny zandary fa voatonona hatrany ny anaran’i Lama isaky ny misy kidnapping. Tamin’ny fotoana nisamborana azy teny Analamahitsy no nitanisan’ireo jiolahy na­many ka isan’izany i Man sy Rajim ary teratany karana iray antsoina hoe Dilavar­hous­sen Raza (efa tratra tao Kaomoro). Ny zandary rahateo efa namoaka didy fikarohana ary nilaza fa homena 200 tapitrisa Ar izay mahita azy.